> Resource> DVD> iche iche Transition mmetụta maka Flash ngosi mmịfe & DVD ngosi mmịfe
Wondershare Foto ngosi mmịfe ngwaahịa na-enye ma ire ụtọ na pụtara 2D / 3D mgbanwe mmetụta maka foto ngosi mmịfe, site n'ozuzu Adalata, igbari, Slide, Push, gburugburu ntughari ka 3D cube, 3D Bugharia, 3D ụgbọelu, wdg Ị nwere ike iji ha maka gị Web Ngosi na DVD ngosi mmịfe.
Site na ndabara, mgbe ị mbubata foto ngosi mmịfe oru ngo, mgbanwe mmetụta ga-etinyere photos enweghị usoro na-akpaghị aka. Ma i nwere ike ịgbanwe ihe ngosi mmịfe mgbanwe mmetụta ọkacha mmasị gị otu. Iji mee otú ahụ, dị nnọọ ịdọrọ na dobe chọrọ mgbanwe mmetụta aga thumbnail ọzọ na foto ị chọrọ mgbanwe mmetụta. Ọ bụrụ na ihe ịga nke ọma, ị ga-achọpụta na ntughari mmetụta thumbnail ga-agbanwe ya.
Cheta na: nanị maka Flash Gallery Factory na DVD Slideshow Builder Deluxe.
Randomize ngosi mmịfe Transition mmetụta
Wondershare Ngosi mmịfe software-enye gị ohere itinye random ngosi mmịfe mgbanwe mmetụta na sekọnd. Site n'ime otú ahụ, ị ​​nwere ike ọzọ ịke nke ngosi mmịfe. Na-adịghị amasị ya? Dị nnọọ randomize ya otu ugboro ọzọ. Ọ bụ ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè. Bọtịnụ na-emekarị locates na ala nke ntughari panel.
Jiri Họrọ Transition Mmetụta ka All slides ọzọ otu bara uru mgbanwe mmetụta ngwá ọrụ na-"Jụọnụ ndị na All". Dị nnọọ pịa ya itinye ọkacha mmasị gị mgbanwe mmetụta niile slides.
Hazie a Transition Mmetụta maka DVD ngosi mmịfe
Ọ bụrụ na ị na-eji Wondershare DVD ngosi mmịfe Nrụpụta, i nwere ihe nhọrọ hazie a DVD ngosi mmịfe mgbanwe mmetụta site adiana, Division na Duration na Dezie Transition dialog, nke nwere ike-arụ ọrụ dị ka nke a: akpa nri-pịa mgbanwe mmetụta thumbnail on storyboard na họrọ "Dezie Transition" ihe.
- Adiana: bugharia mbụ udi site 0, 90, 180 na 270 degrees. - Division: oyiri mgbanwe mmetụta site 1 na 4 ugboro. - Duration: Mee ngosi mmịfe mgbanwe ọsọ na sekọnd-eme ka mgbanwe iji nwayọọ na quicker.
Mee Your Flash Transition mmetụta
Elu àgwà flash mgbanwe mmetụta n'etiti oyiyi pụrụ inye gị nnọọ ịtụnanya obi na-adị, ị pụrụ ịhụ ọtụtụ pụtara flash image ikwu n'ụzọ a puku ugboro, na mmetụta yiri mgbagwoju anya ọ bụ ezie na anya fancy.
Wondershare Flash Gallery Factory ike ka ị na-eme ike flash ngosi mmịfe ngosi na oyi flash mmetụta na nkeji, dị ka ọtụtụ ndị prebuilt flash ikwu n'ụzọ na mmetụta na-nyere na software, ọ bụ nnọọ mfe-arụ ọrụ na na ọ dịghị nzuzo nkà na-achọrọ.
Na ndị a na 100+ ikwu n'ụzọ na ngagharị mmetụta nakawa etu esi, i nwere ike họrọ flash mgbanwe mmetụta site na otu image na-esonụ otu maka gị flash ngosi mmịfe na otu click, gụnyere 3D tile ikwu n'ụzọ, ehichapụkwa mgbanwe, flash ichabo mmetụta, flash ikwommiri mgbanwe wdg
Nke a bụ ọgwụgwụ nke ngosi mmịfe mgbanwe mmetụta mmeghe na ojiji. Njikere ime foto ngosi mmịfe na omenala mgbanwe na-akpata?
Download DVD Slideshow Builder Deluxe Mee DVD ngosi mmịfe
Download Flash Gallery Factory Deluxe Mee Flash ngosi mmịfe
Top 10 DVD Rentals na Netflix na 2014
Olee otú Mepụta DVD on OS X Mavericks
Otú ịgbanwe Booktype / Bitsetting na ImgBurn?
MSWMM ka DVD - Olee ka Play na Ọkụ MSWMM ka DVD
Olee otú iji tọghata na Nyefee VHS ka DVD (Windows 8 gụnyere)